बाहुवली अभिनेता प्रभासलाई युवती फ्यानको थप्पड ! यस्तो पो रहेछ थप्पडको कहानी - सुदूरखबर डटकम
बाहुवली अभिनेता प्रभासलाई युवती फ्यानको थप्पड ! यस्तो पो रहेछ थप्पडको कहानी
‘बाहुबली’को ठूलो सफलतापछि यसै वर्षको १५ अगष्टको अवसरमा अभिनेता प्रभाषको फिल्म ‘साहो’ दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदै छ । एक्शनले भरिपूर्ण प्रभाषको यो फिल्म फ्यानहरुको पर्खाईको फिल्म बनेको छ । सोसल मिडियामा प्रभाषको एउटा भिडियो निकै भाइरल बनिरहेको छ, जहाँ उनी लस एञ्लिश गइरहेका छन् । उनी ‘साहो’को बाँकी सुटिङको लागि त्यहाँ पुगेका हुन् । यसै अवसरमा प्रभाषलाई देखेर एउटी युवती फ्यान निकै एक्साइटेड भएकी दृश्य देख्न सकिन्छ ।